CANAB OO UBAX AH IYO SIFOOYINKIISA - CANAB
Muddada go'aamisa tayada goosashada xiga waa ubaxa canabkiisa. Aad ayey muhiim u tahay in laga fogaado dhibaatooyinka wajigan ah ee horumarinta dhaqanka. Haddii aysan jirin wax suurtagal ah oo saameyn ku yeelan kara xaaladaha cimilada, markaa waa lagama maarmaan in la sameeyo waxa ku xiran gacanta gacmaha.
Sharraxaadda iyo qaababka mudada
Marka canabku Bloom, xaaladaha heerkulka, heerka qoyaanka, iyo sidoo kale daryeelka beerta for dalagga waa muhiim weyn. Xaaladaha xaaladaha cimilada ee heerkan waa qiyaastii 25-30 ° C iyo abaar dhexdhexaad ah.
Marka beerta beerta ay bilaabato inay ubaxdo waxay ku xiran tahay gobolka. Badanaa geeddi-socodka wuxuu bilaabmaa dhammaadka May. Ubax waa wax xun ubax.
Heerka ka hooseeya 15 ° C iyo qiyaasta sare ee qoyaanka, ubaxa canabku wuu hoos u dhacayaa, pollin waa mid aan firfircooneyn, iyo, natiijada, tirada yar ee ugxan-yari ayaa la sameeyay.
Aan ka yareyn muhiimadda waa qadarka ku filan ee nafaqooyinka ee ciidda u dhow baadiyaha. Pollen waxaa la sameeyay wax yar. Haddii ciidda saboolka ah, ugxansidaha, siday u kala horreeyaan, waxay noqon doonaan kuwo dhif ah. Joogitaanka dabaylaha ayaa sidoo kale si xun u saameeya dhaqanka, maadaama ay jeexi karaan ugxan iyo ubaxyo ka yimaada asliga ah.
Waxaa xiiso leh, waqtiga canabka ee ubax ku dhacaya mudadaas laga bilaabo 7 ilaa 11 subaxnimo. Tan macnaheedu waa in geedi socodka ubaxu aanu ku dhicin saacad kasta. Wakhtiyada kale, ubax kaliya ayaa ubax noqon kara. Pollination ayaa dhacaya toddobaadka dhexdiisa.
Inta lagu jiro muddadaa, ubaxku wuu iftiimaa wuxuuna noqdaa qoyan. Kadib marka la gooyo maaddada wasakhaynta, waxay soo baxaysaa oo ugxan-yari bilaabaysaa inay sameysanto.
Waa muhiim! Muuqaalka beeraha canabka ah waa xitaa xaaladaha cimilada ee ku haboon, kaliya kala bar oo dhan ubaxa waa la bacrimiyey. Haddii ay dhacdo roobab, 10 kaliya ayaa ka jawaabi doona pollination.-20 %.
Sidoo kale akhri beerista nooca caleenta ah: "Annie", "Blagovest", "Jupiter", "Viking", "Rochefort", "Vodogray", "Gala", "Monarch", "Lily Dooxada", "Chameleon", "Rumba "," Sofia "," Lancelot "," Zabava "," Lydia "," Annie "," Laura "," Kesha "," Veles "," Talisman ".
Canab ka hor inta ubaxu u baahan yahay si loogu diyaariyo geeddi-socodka ayaa ahaa midka ugu muhiimsan. Gugtan, dhowr dhacdooyin diyaar garow ah ayaa la qabtaa:
Sameynta duurka. Marxaladani waxay lagama maarmaan tahay in la gooyo qaybaha cagaaran ee dheeraadka ah. Sidoo kale waa ku habboon tahay in la haysto caleemaha caleemaha yar yar, taas oo guga dhab ahaantii u baahan yahay qaab. Sida caleemaha qaangaarka ah oo dheeraad ah, waa in sidoo kale la baaraa oo lagu saxo haddii loo baahdo, meeleyntooda. Waxaa muhiim ah in la hubiyo booska raaxada ee warshadda si qorraxdu u hesho rucubo. Intaa waxaa dheer, waxay noqon doontaa hab fudud iyo ninkii beerta ka shaqaynayay si uu u daryeelo beerta canabka ah.
Waraabinta Canab ee xilliga guga waxaa loo baahan yahay waraabinta joogtada ah. Markaad hubineyso isaga, waxaad iska ilaalin kartaa muuqaalka dillaaca ee berry mustaqbalka marka ay jiraan maalmo roobab. Fursad aad u fiicani waxay noqonaysaa in lagu buufiyo xal boron, taas oo saameyn aad u wanaagsan ku yeelan doonta geedka iyo waxay si dhab ah u saamayn doontaa horumarinta tayada miraha geedka.
Daryeelka loogu talagalay burooyinkeeda. Nidaamkani caadi ahaan wuxuu ka hadlaa noocyada canab ee miro ku dhiga kooxo waaweyn. Qeybta ugu hooseysa waa in caleemaha dhali doona miraha, ka tagaan hal kaliya, farqiga ugu xiisaha badan, iyo inta kale ayaa gacanta laga saaraa. Sidaas darteed waxaad ka badbaadin kartaa beerta canabka ah ka culus badan.
Ka ilaalinta cayayaanka iyo cudurrada. Si arrintan loo sameeyo, ku buufin beerta canabka ah ee ku saabsan 3-5 maalmood ka hor ubaxyada bilawday inay ubaxdo dalagga. Waxaad isticmaali kartaa daawooyinka "Topaz", "Decis" iyo "Ridomil Gold". Waxay ku filan tahay in lagu nadiifiyo biyo iyo gebi ahaanba buufin kaynta.
Habraaca diyaarinta waa mid fudud oo aan waqti badan qaadan, laakiin waxay hubaal ahaan u yeelan doonaan saameyn togan oo ku saabsan dhalidda dalagga.
Ma taqaanaa? Spain iyo Portugal waxaa jira caadooyin cusub oo sannadka cusub ah, taas oo ay lagama maarmaan tahay in la cuno miraha xilliga ugu dambeeya ee sanadka soo socda. Isla mar ahaantaana, weerar kasta oo ka yimaada qulqulatada, 12 canab ayaa la cunaa, 12 doonaana waa isku mid ah.
Daryeelka sabiibta inta lagu jiro ubax
Si toos ah inta lagu guda jiro ubaxyada ubaxyada, daryeelka waa in ay ahaataa mid dhamaystiran oo dhamaystiran oo suurtagal ah. Beeridda iyo goosashada way dhacdaa hadda.
Winegrower ayaa samayn kara habka macdanta kale ee pollination. Si loo dhammeeyo, muddo toddobaad ama laba waji ubax gaaban, mid waa inuu socdaa 2-3 jeer beerta beertiisa iyo dhaqdhaqaaq fiiqan ruxin fiilooyinka, kuwaas oo u adeegaya sidii qaab shiidan geedka.
Ruxida noocan oo kale ah ee manka waa in la sameeyaa subaxdii markii dharabku horey u soo degay. Nidaamyadan fudud waxay kordhin karaan wax-soo-saarka 15-30%.
Waa muhiim! Inta lagu jiro dhoobada, dhoobada iyo roobka macmal pollin waa wax aan macquul ahayn.
Tirada, iyo tan ugu muhiimsan, tayada burushyada waa la hagaajin karaa iyada oo loo marayo nafaqooyinka dheeraadka ah ee ciidda. Ka dib markii 4-6 maalmood ka dib ubaxa bilaabaan inay ubaxu, waxaad gali kartaa bacriminta potassium-nitrogen adag. Tusaale ahaan, waxaad codsan kartaa "Vuksal Kombi B", oo leh qadar badan oo boron ah oo ka kooban qaybtiisa.
Haddii daawo kale loo doorto, ka dibna boron waa in lagu daraa si gooni ah, maxaa yeelay waxay leedahay saameyn aad u wanaagsan oo ku saabsan samaynta manka iyo heerka bacriminta ubaxyada.
Waxqabadyo laguma talin
Waxaa sidoo kale jira dhowr geedi socod oo dayactir ah oo laga yaabo inay waxyeello u gaysato beerta canabka ah ee marxaladdan.
Waraabinta canab dhirta looma baahna, maaddaama huurka badani uu si xun u saameynayo wasaqeynta.
Laguma talin in la galo marxaladdan wax kasta oo dhul-dhuleed ah - qodaya ciidda, jaridda dhirta. Waxaa fiican, haddii loo baahdo, si ay u sameeyaan meel canab ah ka dib markii ubax.
Daaweynta kiimikada ee loogu talagalay ujeedada cayayaanka iyo ilaalinta cudurrada looma oggola inuu sameeyo marxaladdan.
Ma taqaanaa? Canab waxaa lagu yaqaanaa sifooyinka bogsashada. Fikradda "ampelotherapy", oo macnaheedu yahay "daaweynta canab", ayaa xitaa lagu soo bandhigay daawo. Waxay isticmaasha ma aha oo kaliya berry, laakiin sidoo kale casiir, alwaax, caleemo iyo qaybo kale oo dhirta.
Muddada wajiga ubaxa
Muddo intee ah canabku way ubaxaa waxay ku xiran tahay cimilada. Waxay qaadataa ilaa 1 asbuuc. Haddii ay jirtay heerkulka hawada ilaa 15 ° C iyo ka hooseeya, geedi socodku wuxuu qaadan karaa 2 asbuuc. In cimilada diiran, ku xiran tahay kala duwan, canab ah Bloom dhamaadkii May ama horraantii June.
Daaweynta canab ee marxaladda ubaxyadu maaha mid shaqeynaya, xitaa bilawga beerta viticulture. Laakiin xitaa mishiinnadan sahlan waxay yeelan doonaan saameyn aad u wanaagsan tayada iyo tirada miro-galka mustaqbalka.